စိတ်ဆန္ဒ – Grab Love Story
အသက် ( ၁၈ ) နှစ်အရွယ် ချောမောလှပ ၊ တောင့်တင်းဖြူဝင်း သော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဗင်ကားအဖြူလေး၏ ကားတံခါးကို ဆွဲဖွင့်၍ကူရှင်ပေါ်တင်ပါးလွှဲ ထိုင်ချလိုက်ပြီးခြေထောက်လေးနှစ်ချောင်းကိုဆွဲ၍တင်လိုက်သည်..။ပေါင်လည်လောက်နီးနီးသို့ပင်တိုကပ်နေသောစကပ်တိုလေးအနားကဝဲခနဲလန်တက်သွားသည်..ကောင်မလေး……အတော်လှလာတာပဲ…….ဒရိုင်ဘာခုံတွင် ထိုင်နေသော ကိုကျော်စိန်ကနွယ်နီလှိုင်ကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှ မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်..။ သူမကားတံခါးကိုဂျိုင်းခနဲဆွဲပိတ်လိုက်တော့မှကိုကျော်စိန်၏အကြည့်ကသူမထံမှလွှဲ၍ရှေ့တူရူသို့လှည့်လိုက်သည်မောင်းတော့…..ဦးလေး……ဘယ်ကိုဝင်ဦးမလဲ….နွယ်နီအင်း…..မရှိတော့ပါဘူး..အိမ်ကိုပဲပြန်တာပေါ့……”နွယ်နီလှိုင်စဉ်းစဉ်းစားစားနှင့်တွေးတွေးဆဆလေးပြောသည်..။ပြီးတော့ချက်ချင်းပင်ကိုကျော်စိန်ရှိရာဖက်သို့လှည့်လိုက်ပြန်သည်..။ အော်….မေ့လို့….ဟို….ဒယ်ဒီမှာခဲ့တဲ့ကိစ္စလုပ်ရဦးမယ်….ဦးလေး….၊ပန်းရံသမားတွေဆင်းခိုင်းဖို့လေ……အင်း….ခုပဲအဲဒီဖက်ကိုတစ်ခါတည်းလှည့်ဝင်လိုက်မယ်အစ်ကိုကြီးကဒီတစ်ခေါက်ကြာမယ်နဲ့တူတယ်…..ဟုတ်တယ်….ဦးလေး….ဒက်ဒီနဲ့မာမီက မာမီ့တူမ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ မန္တလေးကပြန်မှာဆိုတော့တစ်လနီးပါးလောက် ကြာလိမ့်မယ်နဲ့ တူတယ်နွယ်နီ့ အန်တီလေးက အိမ်မှာလာနေပေးမှာပေါ့…..ဟုတ်တယ်…ဦးလေး…သူလာပြီး မနေလဲ နွယ်နီ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်ရုံပဲအန်တီလေးကဒက်ဒီ့ညီမဆိုပေမယ့်ဖအေတူမအေကွဲညီမလေဆိုးလို့ အိမ်ကပစ်ထားတာ…ပြန်ခေါ်တာတောင်တစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးအရင်တစ်ခေါက်အစ်ကိုကြီးတို့သွားတုန်းမာလာခိုင်ဒီမှာလာနေတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ…ဒီမှာကတော့ ခဏပဲလာနေတာလေ…ပြီးတော့ ဒက်ဒီ့အိမ်လဲဖြစ် နွယ်နီကလဲ ရှိတော့သူငြိမ်နေတာပေါ့…. ၊ ဒါပေမယ့် အန်တီလေးက နွယ်နီ့အပေါ်တော့ ကောင်းပါတယ်…အရင်တစ်ခါကလို ညနေကျရင် မာလာခိုင်ကို ဦးလေး သွားခေါ်ပေးရဦးမလား….အန်တီလေးက ဖုန်းဆက်ထားတယ်….ညနေကျရင် သူ့ဖာသာပဲ လာခဲ့မယ်တဲ့..ဦးလေး…သွားခေါ်ဖို့မလိုတော့ဘူး…..။
အင်းအင်း……ကိုကျော်စိန်နှင့်နွယ်နီလှိုင်တို့နှစ်ယောက်သားစကားစပြတ်သွားကြသည်.စကားပြောရင်းမာလာခိုင်၏အကြောင်းပါလာတော့ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ရင်ထဲ နွေးသွားမိသည်..။ အသက်(၃၀)လောက်ပင်ရှိသေးသောမာလာခိုင်၏အလှကအသက်(၄၀)ကျော်လူပျိုကြီးကိုကျော်စိန်၏ရင်ကိုစွဲငြိစေခဲ့တာတော့အမှန်ပင် ဖြစ်သည်..။ဒါပေမယ့်မာလာခိုင်ကသူ့အလုပ်ရှင်အစ်ကိုကြီးဦးထွန်းခိုင်၏ညီမဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း၊နောက်ပြီးမာလာခိုင်ကခေသူမဟုတ်ဒီအသက်အရွယ်နှင့် ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရခဲ့ဖူးပြီးပြီမာလာခိုင်၏ပထမ ယောက်ျားက သူမတို့အိမ်မှ ဒရိုင်ဘာဖြစ်ပြီးဒုတိယ ယောက်ျားကထိုဒရိုင်ဘာ၏ ညီအရင်းဖြစ်လေသည်..။ ဒါတွေကြောင့်လည်း သူမကို မိသားစုတစ်ခုလုံးက ဖယ်ကျင်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..။ ဒီလိုအကြောင်းများကြောင့် မာလာခိုင်အား ကိုကျော်စိန် လက်ရှောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..။ နို့မို့ဆိုရင်တော့ကျော်စိန်ဆိုတာကလည်း ခေသူမှ မဟုတ်တာ..။လူပျိုကြီးတွေလူပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကနှစ်ရပ်ရှိသည်..။နုံလွန်းလျင်လည်း လူပျိုကြီး ဖြစ်တတ်သည်..။ လည်လွန်းလျင်လည်းလူပျိုကြီဖြစ်တတ်သည်.။ကိုကျော်စိန်ကဒုတိယအမျိုးအစားထဲကလည်လွန်း၍လူပျိုကြီးဖြစ်ရသူတစ်ယောက်ပင်…။မောင်းလာသော ကားလေး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တရိပ်ရိပ်ပြေးလွှားမောင်းနှင်၍ လာရင်း တစ်နေရာအရောက်ဆောက်လက်စ တိုက်ကြီးတစ်လုံး၏ ရှေ့တွင် ထိုးရပ်လိုက်သည်..။ ပြီး…ကားဟွန်းသံ နှစ်ခါလောက်ပေးလိုက်သည်..။ ထိုအခိုက် ဆောက်လက်စ တိုက်ကြီးဆီမှ လူတစ်ယောက် သူတို့ကားလေးရှိရာသို့ ဦးတည်၍ပြေးထွက်လာသည်..။ အသားညိုညို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ကိုယ်လုံးကတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြင့်အသက်၃၀ကျော်လောက်ရှိပြီဟုခန့်မှန်းရသည့်ထိုသူကသူတို့၏ရပ်ထားသောကာလေးဘေးသို့အရောက်ရပ်လိုက်သည်..။ကားတံခါး မှန်အား ကိုကျော်စိန်က ချလိုက်သည်..။ ထိုနည်းတူ နွယ်နီလှိုင်ကလည်း သူမဖက်ရှိကားတံခါးမှန်ကို ချလိုက်ပြီး လက်ထဲမှ ပီကေဗူး အခွံလေးကို အပြင်သို့ လွှင့်ပစ်လိုက်သည်..။ကိုခင်အေး….ခင်ဗျားတို့ အလုပ် လာဆင်းလို့ရပြီ…. ပစ္စည်းတွေ အစုံရောက်နေပြီ၊ဘိလပ်မြေကမနက်ရောက်မယ်…၊အစ်ကိုကြီးက ကားဂိုဒေါင်ကိုတစ်လအတွင်းအပြီးလုပ်ပေးဖို့ မှာသွားတယ်…ဒီမှာကလည်း အလုပ်ကမပြတ်သေးဘူး…အစ်ကိုကြီးကတော့ မနက်ဖြန် စပြီးလုပ်ဖို့ မှာသွားတာပဲ…ဘယ့်နှယ့်လဲ…ဆင်းနိုင်ပါ့မလား……မနက်ဖြန်တော့ ဆင်းနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူး…နဲ့တူတယ်မဖြစ်ဘူး…အစ်ကိုကြီးက ခင်ဗျားတို့ မလုပ်နိုင်ရင် တခြားလူကို ခေါ်ခိုင်းဖို့ မှာထားတယ်…။ ထီ…ွ …..တိုးလည်း မတိုး ကျယ်လည်းမကျယ် ၊သာမန်မျှသော အသံဖြင့် နွယ်နီ တံတွေးတစ်ချက်ထွေးလိုက်သည်..။ ပြီး…သူမစိတ်ထဲမှလည်း…ဟင်း…သူကများ..ဟူသော အတွေးဖြင့် မျက်နှာလေးမာတင်းခက်ထန်သွားရသည်..ကောင်းပြီလေ….မနက်ဖြန်တော့မလုပ်နဲ့သန်ဘက်ခါလာပြီးဆင်းပေးပါ့မယ်….လာဖြစ်အောင်တော့ လာခဲ့ ကိုခင်အေး…ကဲ..ဒါဆို ကျုပ်တို့လဲ သွားမယ်…အင်း…..စကားလည်းဆုံးရော မောင်းထွက်သွားသည့် ကားလေးကို ကြည့်ရင်း ပန်းရံဆရာ ကိုခင်အေးပြုံးလိုက်မိသည်..။
ကားပေါ်မှကောင်မလေးအတော်လှ၍သူစကားပြောရင်းငေးကြည့်လိုက်မိသည်..။ဒါကိုကောင်မလေးကမတူမတန်သလိုပုံနဲ့ ထွီခနဲတံတေွးတစ်ချက် ထွေးလိုက်တာကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ဒီလိုပါပဲ..ဒါမျိုးလေးတွေက ဟင်း…မတွေ့သေးလို့ပါ…၊ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီ ဆိုတော့ ဒီကဖြင့်ဘာမှ မဖြစ်သေး..၊ သူတို့က တဖျန်းဖျန်း ပြီးနေတတ်တာလေးတွေ…ဟုတွေးရင်း ခင်အေးသည် ရပ်နေရာမှလှည့်ထွက်ခဲ့လေတော့သည်..။ မနက် မိုးလင်းသည်နှင့် ကိုကျော်စိန်က ရောက်နှင့်နေပြီးနွယ်နီနှင့်မာလာခိုင်တို့တူဝရီးကိုဈေးသို့ပို့ပေးရသည်..။ဈေးတွင်စားသောက်ဝယ်ခြမ်းပြီးဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ နွယ်နီအားကျူရှင်သို့ဝင်ပို့ခဲ့ပြီးမာလာခိုင်ကိုအိမ်သို့ပြန်ပို့ပေးရသည်..။ကားပေါ်မှနွယ်နီဆင်းသွားသည်နှင့်မာလာခိုင်တစ်ယောက်ရှေ့ခန်းသို့ပြောင်း၍ထိုင်သည်..။မွှေးကြိုင်သော ရနံ့လေးများက ကိုကျော်စိန်အား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လာသည်..။ မာလာခိုင်၏တောင့်တင်းတုတ်ခိုင်သော ပေါင်တန်ကြီးများက လုံးတစ်နေပြီး ၊အင်္ကျီထဲမှ တိုးထွက်တော့မယောင်နို့အုံကြီးများကကိုကျော်စိန်၏မျက်စိရှေ့ဝယ်အလှပြနေသလိုဖြစ်နေသည်..။စကားမရှိစကားရှာ၍ပြောရင်းတစ်ချက်တစ်ချက်စိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်သော မာလာခိုင်၏မျက်လုံးရွဲကြီးများက ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ဘရိတ်ကို နင်းလိုက်မိသည်အထိ စိတ်တွေဂယောက်ဂယက်ဖြစ်စေသည်..။ ကိုကျော်စိန် သက်ပြင်းတွေ အခါခါ ချရင်း ကားကိုသာ ဂရုစိုက်၍ မောင်းနှင်လာခဲ့ရသည်..။အိမ်ပြန်အရောက် ကားကို ခြံဝင်းထဲ ကွေ့ဝင်လိုက်တော့ ပန်းရံများ ရောက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ကားဝင်လာတာ မြင်ရသည်နှင့် ခင်အေးက ပေါ်တီကို အောက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ် ထလာသည်..။ကားရပ်လိုက်သည်နှင့် မာလာခိုင်က ဈေးခြင်းတောင်း ဆွဲ၍ ကားပေါ်မှ ဆင်းကာ အိမ်သော့ကို ဖွင့်ဝင်သွားသည်..။ ကားဘေးတွင် ရပ်နေသော ခင်အေး၏ မျက်လုံးများက မာလာခိုင်၏ နောက်သို့ ပါ၍သွားသည်..။ ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသော ကိုကျော်စိန်ကိုပင် ဂရုမစိုက်နိုင်ပေ..။ ကိုကျော်စိန်၏ စိတ်ထဲခပ်တင်းတင်း ဖြစ်၍ သွားရသည်..။ ကိုကျော်စိန်…ဒီနေ့ ကျနော်တို့ စဆင်းမယ်..အင်းမြင်ကွင်းမှ မာလာခိုင် ပျောက်ကွယ်သွားမှ ခင်အေးက ကိုကျော်စိန်ဖက်ကို လှည့်၍ ပြောသည်..။ ကိုကျော်စိန်ကစိတ်မပါသလိုအင်းလိုက်ရင်းခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ထိုင်နေသောပန်းရံများကိုကြည့်လိုက်သည်..ဟင်….မင်းနဲ့မှသုံးယောက်ထဲလား…..ဒီနေ့တော့ကျနော်နဲ့ ဟိုစွပ်ကျယ်ဝတ်ထားတဲ့ ကောင်လေး နှစ်ယောက်ထဲ ဆင်းမှာ..၊ ရှပ်အင်္ကျီ နဲ့ကောင်က ဟိုဖက်ဆိုက်ထဲ လွှတ်လိုက်ရမှာ..၊ သုံးလေးရက်လောက် နေမှ ဒီမှာ အကုန်လာဆင်းမယ်..၊ကျနော့်လူအားကတော့ ခင်ဗျားသိတဲ့ အတိုင်းပဲ… အေးလေ…. ဒီနေ့စဆင်းရင် ပြီးတာပဲ…ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ အစ်ကိုကြီးက မင်းကို ပြောထားပြီးပြီမဟုတ်လား…. ပြောထားပြီးပါ ပြီ…ကဲ….ဒါဆိုလဲ…စလုပ်တော့….စကားစကိုဖြတ်၍ ကိုကျော်စိန် တိုက်ထဲ ဝင်လာခဲ့ပြီးဧည့်ခန်းထဲမှာထိုင်၍ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုယူကာဖတ်နေသည်..။
ကိုကျော်စိန်၏ စိတ်က ဂျာနယ်ထဲသို့ ရောက်၍ မသွား ၊ မာလာခိုင် ထံသို့သာရောက်နေသည်..။ ဂျာနယ်ကို ကြာကြာမဖတ်နိုင်..။မာလာခိုင်ကိုတွေ့မြင်ချင်စိတ်က ပြင်းပြလာ၍သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို လေးပင်စွာ ချ၍ ကိုကျော်စိန် ထရပ်လိုက်သည်..။ အိုး….ကိုကျော်စိန်ကြီးကလဲ…အသံမပေး ဘာမပေးနဲ့…၊ ဒီမှာ အဝတ်လဲနေတာ…..ထမီကို ရင်လျားရန် လက်နှင့် စုကိုင်ရင်း ပြောလိုက်သော မာလာခိုင်၏ ဖွေးဖွေးနုနု နို့အုံနှစ်လုံးကနို့သီးထိပ်လေးမှ လွဲ၍ အတိုင်းသား မြင်နေရသည်..။ မာလာခိုင်က အဝတ်လဲတာ အိပ်ခန်းထဲတွင် မဟုတ်ပဲမီးဖိုထဲတွင် ဖြစ်နေသည်ကို ကိုကျော်စိန် မစဉ်းစားတတ်…။ လက်တစ်ကမ်း အကွာတွင် မြင်တွေ့နေရသောမာလာခိုင်၏ ရင်သားအိအိများ အလှတွင်သာ စွဲငြိနေသည်..။ဗြုံးခနဲ ကိုကျော်စိန်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ အံအားသင့်သွားလို့လား မပြောတတ်..။ ထမီကို ခုချိန်ထိ ရင်လျားမဝတ်သေး..။ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်၍ ကြောင်ကြည့်နေပြီးမှ မာလာခိုင်က မျက်လွှာချကာထမီကို ဝတ်ရန် ဖြန့်လိုက်သည်..။ အောက်ဖက်ကိုလျှောကျသွားသော ထမီ အပေါ်နားစက နို့နှစ်လုံးလှစ်ဟပြလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်..အို….အာ့….မလုပ်နဲ့….မလုပ်နဲ့……အား….ကို….ကိုကျော်စိန်ကြီးနော်…အိုအို…မလုပ်နဲ့…နော်…မလုပ်နဲ့…လို့..အိမ်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာ ရှိသည်ဟူသော အသိနှင့် မာလာခိုင်၏ အကျင့်စရိုက်ကို သိထားသောကိုကျော်စိန်က မာလာခိုင်၏ ခါးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့်အားယူဆွဲပွေ့ရင်းနို့တစ်ဖက်ကိုငုံ့၍စုပ်လိုက်သည်..။ရင်ဘတ်လေးကော့တက်သွားသောမာလာခိုင်ကအထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ဖြင့်နှုတ်မှတားနေသော်လည်း ကိုကျော်စိန်က အရေးမစိုက်တော့ပါ..။ မာလာခိုင်ကလည်း အသည်းအသန်ရုန်းကန်ခြင်း မပြု..။ ကျန်နို့တစ်ဖက်အားကိုကျော်စိန်ကလက်ဖြင့်ညှစ်၍နယ်သည်..။တင်းနေသောနို့အုံလုံးလုံးကြီးတွေကကိုင်ရတာအရသာတွေ့လှသည်..။ထမီစကိုကိုင်ထားသောသူမလက်နှစ်ဖက်က တဖြည်းဖြည်းအောက်ဖက်သို့ နိမ့်ဆင်းလာသည်..။အိုရှင်……တော်….တော်ပါတော့….တော်ပြီ…ကျမကို လွှတ်ပါ….တော့….ရှင်….မျက်နှာလေး မော့ရင် ပြောနေသော မာလာခိုင်၏ မျက်နှာလေးမှာ ပြုံးယောင်သမ်းရင်းနီမြန်းနေသည်ကိုတော့ကိုကျော်စိန်မမြင်..။ နို့ကိုသာ သဲကြီးမဲကြီး စို့နေသည်..။ တစ်လုံးပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကို ပြောင်း၍ စို့ပြန်သည်..။အို…..မလုပ်နဲ့…..တော်ပါတော့…ဆို….ဟင့်…ကျွတ်….အ………အား….မတ်တတ်ရပ်နေသော မာလာခိုင်၏ ဒူးဆစ်လေးများ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်..။ ညွှတ်၍ကျချင်လာသည်..။
လူပျိုကြီးသာ ပြောရတယ်…၊ နို့စို့တာက ပညာသားပါလှသည်..။ နို့သီးကိုတအားငုံစုပ်ရင်း လျှာထိပ်နှင့် များ ကော်ကော်ထိုးလိုက်တာ မာလာခိုင် ရင်ခေါင်းထဲအထိကြပ်ကြပ်သွားရသည်..။ မျက်စေ့ကို စုံမှိတ်ထားသော မာလာခိုင်၏ လက်ထဲမှ ထမီစက လွတ်ကျချင်လာသည်..။ တဖြေးဖြေးလျှောကျသွားသော ထမီစကြောင့် လစ်ဟာသွားသော သူမ၏ ကျောပြင် ပြည့်ပြည့်လေးကို ခါးတွင်ဖက်ထားသည့် ကိုကျော်စိန်၏ လက်များက ရွေ့လျား လျှောတိုက်၍ ပွတ်သပ်ပေးသည်..။ပြီး …ကျန်လက်တစ်ဖက်ကပါ သူမ၏ နောက်ကျောသို့ရောက်လာပြီးကားစွင့်မို့မောက်နေသောတင်ပါးကြီးတွေကိုဖျစ်ညှစ်သည်..။နှစ်ယောက်စလုံးတုန်တုန်ရီရီဖြစ်ကာအသက်ရှူသံတွေပြင်းထန်နေကြသည်..။ ပျြွတ်ခနဲ မြည်သံနှင့် အတူ ကိုကျော်စိန်က နို့ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်..။ ပြီးတော့တပြိုင်နက်ထဲမှာပင်သူ၏ လက်များကိုလည်း မာလာခိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဖယ်လိုက်သည်..။ အဟင်း…..ဆိုတဲ့ သက်ပြင်းချသံလေးကို ပြုလျက် မာလာခိုင်တစ်ယောက် ထမီ စွန်တောင်ဆွဲလျက်သားအိပ်ခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားသည်..။ သူမ၏ နောက်ကျောမှ လျှောကျနေသော ထမီက အိပ်ခန်းထဲသို့ခပ်သွက်သွက် ပြေးဝင်သွားသော မာလာခိုင်၏ တသိမ့်သိမ့် တုန်ခါသွားသည့် တင်သားအိအိကြီးများကိုအတိုင်းသားနီးပါး လှစ်ဖော်၍ နေသည်..။သူမ၏ နောက်ဖက်မှ ကိုကျော်စိန် လိုက်လာသည်..။ အိပ်ခန်းထဲ အရောက် မာလာခိုင်က ကုတင်ပေါ်ကအိပ်ယာထက်သို့ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကို ဝုန်းခနဲ ပင် လှဲ၍ အချ အနားသို့ ရောက်လာသော ကိုကျော်စိန်ကသူမ၏ကိုယ်ပေါ်ကိုငုံ့၍ဖက်ရင်းကုတင်စောင်းသို့ဒူးထောက်ကာတက်လိုက်သည်..။ ထိုအခိုက်မာလာခိုင်၏ ခါးစောင်းသို့ ဖိထောက်မိလိုက်သော အရာက သေးသေးကွေးကွေး မဟုတ်လှဟုသိလိုက်ရသောမာလာခိုင်တစ်ယောက် ရင်ထဲတဒိန်းဒိန်း နေအောင်ပင်ခုန်လို့သွားရလေသည်..။ ကိုကျော်စိန်က အိပ်ယာထက်တွင် တစောင်းလှဲနေသော မာလာခိုင်ကို ပက်လက်ဆွဲ၍ လှန်လိုက်သည်..။မာလာခိုင် ဘာစကားမှ မဆိုတော့…၊ မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်ထားရင်း မျက်လုံးများ အပေါ်၌ သူမ၏လက်ဖျံတစ်ဖက်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်၍ တင်ထားလိုက်သည်..။တရှူရှူး တရှဲရှဲဖြင့် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းထန်နေသော ကိုကျော်စိန်က သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲထောင်၍ ထမီကို ခါးသို့ လှန်တင်လိုက်သည်..။
မာလာခိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ရှိသောတစ်ထည်တည်းသော ထမီလေးမှာ ခါးနှင့် ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင် ပုံလျက်သား …။ သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာဖွေးဖွေးနု၍ တင်းရင်း ဝင်းမွှတ်နေသည်..။ တင်ထားသောလက်အောက်မှမျက်လုံးကိုခပ်မှေးမှေးလေးဖွင့်ကာကြည့်နေသောမာလာခိုင်စအိုလေးကိုပင်တစ်ချက်ရှုံ့လိုက်မိသည်..ကိုကျော်စိန်ကသူမ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကိုင်၍ဒူးထောက်လျက်ရှေ့သို့တိုးလိုက်သည်..။မာလာခိုင်ခိုးကြည့်နေသောမျက်လုံးများကိုပြန်၍မှိတ်ချလိုက်သည်..။ကိုကျော်စိန်……..ကိုကျော်စိန်…..ဗျို့….ကိုကျော်စိန်…အိမ်ရှေ့မှ ခေါ်လိုက်သော ခင်အေး၏ အသံ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားကြသည်..။ကိုကျော်စိန်…ကိုကျော်စိန်….”ခေါ်သံက ဧည့်ခန်းထဲသို့ပင် ရောက်၍ လာသည်..။ ကိုကျော်စိန် ကမန်းကတန်း ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်ရင်း အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လိုက်သည်..။ ထိုအခိုက် မာလာခိုင်၏ ထံမှတောက်ခေါက်လိုက်သံကိုတော့ ရှေ့သို့ အာရုံရောက်နေသော ကိုကျော်စိန် မကြားလိုက်ရပေ..။ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ရပ်နေသော ခင်အေးနှင့် ကိုကျော်စိန် မျက်နှာချင်း ဆိုင်မိသည်..။ ဘာလဲ…..ကိုခင်အေး…ဒီမှာအိမ်သာတက်နေတာ…..ဟဲ…….ဟဲ…….ကိုကျော်စိန်ကိုကြည့်၍ခင်အေးရယ်လိုက်သည်..။ပြီးမှ….ဘိလပ်မြေမရောက်သေးဘူး…အဲဒါ ပေးပါဦး…..ဟင်……ခက်ပြီ….ဘိလပ်မြေဆိုင်၏ ဖုန်းနံပါတ်အား ကိုကျော်စိန် မသိ..၊ နွယ်နီလှိုင်သာ သိသည်..။ ဆိုင်သို့ ကားဖြင့်အရောက်သွား၍ ပြောရုံသာ ရှိသည်..။ ပုဆိုးထဲမှ လီးကလည်း တောင်နေတာမှ တဆတ်ဆတ် ခါနေသည်..။ဘိလပ်မြေမရောက်၍ ပန်းရံသမားများ ပြန်သွားရတာကို အစ်ကိုကြီး ပြန်လာ၍ သိသွားလျင်ကိုကျော်စိန်ဆက်၍မတွေးတော့…။ လက်ပတ်နာရီကို မြှောက်၍ ကြည့်သည်..။ မနက် ၈ နာရီခွဲပြီ..။ကိုကျော်စိန်ခေါင်းနပန်း ကြီးသွားသည်..။ ၉ နာရီခွဲကို နွယ်နီလှိုင်အား သွား၍ ခေါ်ရအုံးမည်..။ သူ မာလာခိုင်နှင့်တွေ့ဖို့ မလွယ်တော့..။ ဘိလပ်မြေဆိုင်ရောက်ပြီးသည်နှင့်ခုချက်ချင်းပို့ရန်ပြော၍နွယ်နီလှိုင်ကိုတစ်ခါတည်းတန်း၍သွားခေါ်ရန်သာရှိတော့သည်ဟင်းခုပဲကျုပ်သွားလိုက်မယ်….ဟဲဟဲ……တဟဲဟဲ ရယ်၍ ရယ်ကြဲကြဲ လုပ်နေသော ခင်အေးကို နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် တချက် ခေါင်းငဲ့၍ ကြည့်ပြီးနှစ်ယောက်သား အတူတူပင် အိမ်ထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်..။မာလာခိုင်တစ်ယောက် သည်းမခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်သွားမိရသည်..အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်သွားသောကိုကျော်စိန်၏ ကျောပြင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း တောက်တစ်ချက် ခေါက်လိုက်မိသည်..သူမ စိတ်ထဲမှာအလိုးခံချင်သည့်စိတ်ဆန္ဒတွေကထိန်းမရအောင်ဖြစ်ပေါ်လို့နေသည်..။ အတော်ပင်ခံစားရခက်နေသည်..။ မာကျောသော အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းထိုးထည့်ချင်နေသည်..။အိပ်ယာထက်တွင် လူးလှိမ့်ရင်း ခါးတွင် ပတ်၍ ပုံနေသော ထမီကို စိတ်မရှည်စွာဖြင့်ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ မာလာခိုင်၏ လက်တစ်ဖက်က ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ရောက်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ကို စမ်းလိုက်သည်..။အမွှေးထူထူဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးက နဲနဲနောနောမဟုတ်..။ အဆမတန် ခုံးထနေသည်..။ ရွှဲနစ်အောင်ထွက်နေသော စောက်ရည်များကိုလည်း စိုခနဲ စမ်းမိလိုက်သည်..။ လက်မထိပ်လေးနှင့်စောက်စေ့ကလေးကို ပွတ်ရင်း လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးထည့်ရန် ပြင်လိုက်သည်..။ဒီလို လုပ်လို့မဖြစ်..။ အပျိုဖြစ်ကထဲက သူမ၏ စိတ်ဆန္ဒကို ဘယ်သောအခါမှ လက်ဖြင့် မဖြေဖျောက်ခဲ့…။မာလာခိုင်စောက်ဖုတ်ပေါ်မှလက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးသက်ပြင်းချလိုက်မိသည်..။ထိုအခိုက်ပူနွေးမာကျောသောအရာတစ်ခုကသူမ၏ပေါင်ရင်းဘေးဖက်သို့ လာ၍ ထိတွေ့သည်..။ ဖြတ်ခနဲ ဖြစ်သွားရင်းမာလာခိုင် မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်..။ဟင်…ရှင်…….ရှင်………မာလာခိုင် အံ့သြထိတ်လန့်စွာဖြင့် ထထိုင်မိမတတ် ဖြစ်သွားသည်..။
သူတွေ့လိုက်ရသည်ကကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ပန်းရံဆရာ ခင်အေးပင် ဖြစ်သည်..။ အလုပ်ကြမ်း သမားပီပီ သန်မာကျစ်လျစ် ဖုထစ်သောခင်အေး၏ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွေ့လိုက်သော မာလာခိုင်အား တဒင်္ဂ ငြိမ်သက်သွားစေသည်..။မင်းလေး…..သိပ်ပြီး အလိုးခံချင်နေတယ် မဟုတ်လား…မင်း မကြုံဖူးသေးတဲ့ အရသာမျိုး ခံစားရအောင်ကိုယ်လုပ်ပေးပါ့မယ်…၊စိုက်ကြည့်နေသောမာလာခိုင်တစ်ယောက်ခါးလေးကော့တက်မတတ်စအိုဝကိုရှုံ့ရှုံ့သွင်းမိနေရင်းစောက်ရည်ကြည်တွေ ထပ်၍ စိမ့်ထွက်လာသည်..။ ခင်အေး ငုံ့၍ မာလာခိုင်၏ ကိုယ်လုံးကို ပွေ့၍မယူလိုက်သည်..။ ခင်အေး လက်ထဲ စွေ့ခနဲ ပါသွားသော မာလာခိုင်က ခင်အေး ကိုကြည်နူးစွာဖြင့်ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေး ကြည့်လိုက်သည်..။ မိန်းမများသည် သူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာအား ယောက်ျားကနိုင်နိုင်နင်းနင်း ချီမပွေ့ယူတာကို ကြည်နူးလိုလားစွာ ခံချင်ကြသည်ချည်း ဖြစ်သည်..။ခင်အေးက မာလာခိုင်အားကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ်၍တင်လိုက်သည်..။ကုတင်စောင်းလိုးနည်းဖြင့်လိုးတော့မည်ကိုသိလိုက်သောမာလာခိုင်ကသူမ၏တင်သားကားကားကြီးကိုကုတင်စောင်းတွင် အသားကျအောင် ပြုပြင်နေရာယူရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်း ကို ကားလိုက်သည်..။သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို မက်မောစွာ ကြည့်ရင်း ခင်အေး ရှေ့သို့ တိုးလာကာ စိုရွှဲနေသော စောက်ပတ်ဝသို့ညီလေးကို မြုပ်အောင် ထိုး၍ အသွင်း မာလာခိုင်ကတွဲလောင်းချထားသော ခြေနှစ်ချောင်းကို မယူ၍ကုတင်စောင်းတွင် ဖနောင့်နှင့် နင်း ပေါင်ကိုကားကာ သူမ၏ တင်ပါးကြီးကို အစွမ်းကုန် ကော့၍ ကော့၍အောက်မှ ပင့်ကာ ကော့ထိုးပစ်လိုက်သည်..။ ပြွတ်….ဗြစ်……..ဖြစ်……..ပြွတ်……….ဖွတ်………အား………ဟင်း………..ခံချင်လွန်းနေသော မာလာခိုင်က အောက်မှ ကော့၍ ပင့်တင်ကာ ခြောက်ခါ ခုနစ်ခါလောက်လိုးလိုက်ပြီးတော့မှ တဒင်္ဂ စိတ်ကျေနပ်သွားပုံဖြင့် ခင်အေးကို မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်.။ ပြီးတော့တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီး သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကုတင်ဘေးတွင် မတ်တတ်ရပ်နေသော ခင်အေး၏ခါးကို လှမ်းချိတ်ကာ ဆွဲယူလိုက်သည်..။မာလာခိုင်က အောက်မှ ပင့်၍ လိုးအပြီး တင်ပါးကြီးကို မွေ့ယာပေါ်ပြန်၍ အချ တဝက်သာသာ ကျွတ်၍ထွက်နေသော ညီလေးကို ခင်အေးက မာလာခိုင် သူ့ကို ခြေထောက်ဖြင့် ချိတ်၍အဆွဲ ညီလေးကိုပါ တပါတည်းလိုက်လိုးသွင်းသည်..။ အ……….အ…..အ…အား….ဟင်း ဟင်း…..မာလာခိုင် ရင်ဘတ်လေး ကော့ ခေါင်းလေးမော့၍ တက်သွားသည်..။ စောစောက ရမ္မက်ဇောကြောင့်သာ အာသာငမ်းငမ်း ဖြင့် ပင့်လိုးခဲ့ပေမယ့်အထိုက်အလျောက် ကျေနပ်သွားရသော်လည်း ခုလို ထိထိမိမိ မရှိလှ..။အပျိုလည်း မဟုတ် ၊ယောက်ျားတော်တော်များများနှင့် ကြုံခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်လင့်ကစား မာလာခိုင်မှာအပျိုစင်လေးပမာ တစ်ကိုယ်လုံး အသားတွေ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် တုန်နေပြီးလက်နှစ်လုံးလောက်အလို ခင်အေးက အားဖြင့် ဆောင့်၍တဆုံးသွင်းချလိုက်သည်..။“ဗြစ်ဖွတ်…..အအမလေး….အ…..ဟင်းဟင်း….လုပ်လုပ်….ဆက်ဆောင့်..အမလေး…..လေး…..”ထောင်တက်နေသောစောက်စေ့ကလေးကို အားဖြင်ဆောင့်ကာစောက်ပတ်အတွင်းနားသို့ဖိသိပ်လိုက်သည်..။ကော့ခနဲဖြစ်သွားရပြီးတစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကာလက်ကလေးနှစ်ဖက်က ခင်အေး၏ လက်မောင်းတွေကို မမှီမကမ်း လှမ်း၍ ဆွဲဆုတ်လိုက်မိသည်..။ ဒီလို နုနယ်ချောမော လှပလွန်းသော မိန်းမမျိုးကို မလိုးဖူးသေးသော ခင်အေးကလည်း မညှာတော့ပါ…။ မာလာခိုင်၏ ဖွေးနုသော နို့နှစ်လုံးကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနှင့်ဆွဲကိုင်ဖျစ်ညှစ်၍စိတ်ရှိတိုင်းဆောင့်လိုးပါတော့သည်..ပြွတ်….ပလွတ်……..ဘွတ်….အားအမလေး..အစ်ကိုရဲ့အမလေး…လေး..ဟင်းဟင်း………ကောင်းလှချည်လား….နော်……အင်း…..အင်း….တအားဆောင့်နေသည့်ကြားမှ အားမရနိုင်ဖြစ်လာရသော မာလာခိုင်က သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုခင်အေး၏ ခါးမှ ဖယ်၍ မိုးပေါ်သို့ထောင်လိုက်သည်ပြွတ်…ဖွတ်….ပြွတ်…..ဘွတ်….အ….ဟင်း….ဟင်း…..အိ….အီး…….အ……မာလာခိုင်၏ ထောင်ထားသော ခြေနှစ်ဖက်က ရမ်းခါ၍ နေသည်..။ မာလာခိုင် မျက်လုံး မပွင့်တော့.။ ခင်အေး၏ ဆောင့်ချက်တွေက လျှော့မသွားသည့် အပြင် ပို၍ပြင်းထန်သွက်လက်လာသည်..။မကြာလှသောအချိန်တွင်တော့ပြွတ်……..ပလွတ်..ပြွတ်……..ဖွတ်……ဖတ်…..အား…အ…….အမလေး..အို…အို…….အမလေး. ..လေး.အား…..ပြီး…….ပြီး………အိုး…..ကောင်း……..ကောင်း……အင့်………အင့်….မာလာခိုင်၏ တင်သားကြီး ကုတင်စောင်းမှ လွတ်ထွက်သွားသည်အထိ ကော့၍ ကော့၍ တက်လာပြီးအရေတွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်..။
ခင်အေးလည်း မကြာခင် ကိုကျော်စိန် ပြန်လာတော့မည် ဆိုတဲ့အသိနဲ့ နောက်ရက်တွေလည်း ရှိသေးတာပဲ ဟု တွေးကာ စိတ်ကိုလျှော့ကာ သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ရင်း ရှေ့သို့ငုံ့၍ မာလာခိုင်ကို ကြုံးပြီး ဖက်ထားလိုက်ပါတော့သည်..။ အန်တီလေး…..နေကောင်းရဲ့လားငွေစက္ကူ တစ်ထပ်ကို ကိုင်၍ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာသော နွယ်နီက မီးဖိုခန်းဝင်ပေါက်နားတွင် ရပ်လျက်ခန္ဓာကိုယ် လေးပင်စွာဖြင့် မလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်လှုပ်ရှားချက်ပြုတ်နေသောမာလာခိုင်ကိုမေးလိုက်သည်ကောင်းပါတယ်….နွယ်နီရဲ့ညကအိပ်ရေးပျက်လို့နုံးနေလို့ပါဖြေမိဖြေရာ ဖြေလိုက်သည်..အင်း………ရပ်နေရာမှ နွယ်နီလှည့်ထွက်မည်အလုပ်…မာလာခိုင်၏ အသံက ထပ်၍ ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်အော်ဒါနဲ့……နွယ်နီ..ညကျရင် တို့မိန်းမသားနှစ်ယောက်ထဲအဲဒါဦးကျော်စိန်ကြီးကိုလာအိပ်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားလိုကောင်းသားပဲအန်တီလေးရဲ့…နွယ်နီပြောလိုက်ပါ့မယ်….လှည့်ထွက်လာသော နွယ်နီ ဧည့်ခန်းထဲ အရောက် ဂျာနယ်ဖတ်နေသော ဦးကျော်စိန်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်..။ ဦးလေး..ဟေ….ဒီမှာ…ပန်းရံဆရာကိုကြိုပေးထားဖို့ငွေသုံးသောင်းအော်……အေးအေး..သမီး….ငွေကိုလှမ်းယူရင်းကိုကျော်စိန်၏မျက်လုံးအစုံက အိမ်နေရင်း စကပ်တိုလေးဖြင့် လှချင်တိုင်း လှနေသောနွယ်နီ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ခပ်ရဲရဲ ကြည့်လိုက်သည်..။ မနက်က မာလာခိုင်နှင့် အစပျိုးခဲ့သော ကိစ္စကကိုကျော်စိန်အား အတော် ဒုက္ခ ပေးနေသည်..။ လီးက ကျတယ်ကို မရှိနောက်ပြီး…အန်တီလေးက ပြောတယ်….ဦးလေးကို ညကျရင် အိမ်မှာ လာအိပ်ပေးပါတဲ့…အင်း….အိပ်ပေးမယ်………ကိုကျော်စိန်စိတ်ထဲ ပျော်သွားသည်..။ဒါနဲ့…နွယ်နီ…မာလာခိုင်ကို ဦးလေးလိုက်ပို့ပေး၇မှာလားခါတိုင်းတော့….သူအိမ်ပြန်ရင် သူ့ဖာသာ မောင်းသွားတာပဲ…ညနေ သူပြန်လာမှ ကားကိုပြန်ယူလာမှာပေါ့…ပြီးတော့ နွယ်နီလဲ ဘယ်မှ သွားစရာ မရှိတော့ပါဘူး…ကိုကျော်စိန် တစ်နေကုန် အားလပ်သွားပြီ…။ ပြောပြီးသည်နှင့်လှည့်ထွက်သွားသော နွယ်နီ စိတ်ထဲ….ဒီနေ့….ဒီလူကြီး အကြည့်ကဘာမှန်းလဲမသိဘူး….ဟုတွေးပြီး…နှုတ်ခမ်းလေး စူလိုက်မိသည်..။ ရေချိုး ထမင်းစားပြီးမာလာခိုင် ကားကိုယူ၍ သူမအိမ်သို့ ပြန်သွားချေပြီ..။ ဦးကျော်စိန်ကအိမ်ရှေ့တိုက်ပန်းခြံအောက်တွင်ရှိသောခုံတန်းလျားပေါ်၌အိပ်နေသည်..။ အိပ်ယာပေါ် လှဲ၍ မဂ္ဂဇင်း ဖတ်နေသောနွယ်နီ တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းထံ ဖုန်းဆက်ရန်း သတိရသဖြင့်စာအုပ်ကိုပိတ်၍ထထိုင်လိုက်သည်..။ထိုအခါအိမ်ဘေး ပန်းခြုံဘေးမှ လှုပ်ခနဲ တွေ့၍လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်..။ စောစောက ငါအိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲပြီး စာဖတ်နေတုန်း ပေါင်ကိုထောင်ပြီးချိတ်ထားသော့စကပ်က ခါးပေါ်လန်ကျပြီး အောက်ပိုင်းမှာဘာမှ မရှိဘူး..၊ သူ…ငါ့ကိုလာချောင်းကြည့်ပြီးငါ့ဟာလေးကို တွေ့ပြီးဒီလိုဖြစ်နေတာများလား…..။ အို….အို……..”နွယ်နီသိမ့်သိမ့်တုန်သွားရပြန်သည်..။စောက်ဖုတ်လေးထဲမှလည်းဘာတွေမှန်းမသိညှစ်ထုတ်လိုက်မိသလို။နွယ်နီမနေနိုင်တော့..။စကပ်လေးအောက်သို့လက်လျှိုလိုက်ပြီးစောက်ဖုတ်ကလေးကိုကိုင်စမ်းလိုက်မိသည်..။သူမကအိမ်မှာနေရင်းမို့ဘာအောက်ခံကိုမှမဝတ်တတ်။ဟင်….သူမစောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံး အံ့သြလောက်အောင်ခုံးထမာကျောနေပြီးအရည်တွေကလည်းအတော်များများပင်စိုရွှဲနေအောင်ထွက်ကျနေသည်..။အရည်တွေကလည်းလက်နဲ့ထိမိလိုက်တော့ချွဲကျိစေးထန်း နေသည်..အို….အိုး….အမေ့……အိုး……ကောင်းလှချည်လား…….၊ အရသာရှိလိုက်တာပါလား..။စိတ်ထဲနဲနဲကျေနပ်သွားသည်..ဟင်ကျွတ်…..ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေသော ဟိုလူကြီး ထိုင်နေရာမှ အထ သူမနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိပြီး လူကြီးက ပြုံးပြ၍လှည့်ထွက်သွားသည်..ငါ့နှယ်…..နော်……သေသာ သေလိုက်ချင်တာပဲ…..တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူသွားသော နွယ်နီ တစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်သို့ ဝုန်းခနဲပစ်လှဲချလိုက်မိလေတော့သည်..။ ဟာ….ကိုခင်အေး…ပြန်တော့မလို့လားဟုတ်တယ်ကိုကျော်စိန်ဒီနေ့ခင်ဗျားကငွေထုတ်ပေးထားတော့ခင်ဗျားကိုပြုစုရအုံးမယ်…ဟာ…ရပါတယ်….ဗျာ….ကဲ…မင်းပြန်တော့…….ကိုခင်အေးက သူ့တပည့်ကောင်လေးကို လှည့်၍ ပြောလိုက်သည်..ဟုတ်ကဲ့..ဆရာ…..လာဗျာ…ကိုကျော်စိန်ဆိုင်က လမ်းထောင့်တင် ရှိတာပဲ…လိုက်ခဲ့ဗျာ…အဲ….ခဏလေး….နော်……ကိုကျော်စိန်က အိမ်ထဲဝင်၍ ဧည့်ခန်းထဲ၌ ရပ်လိုက်သည်..။နွယ်နီရေ….ဦးလေးအပြင်ခဏသွားလိုက်အုံးမယ်……ဟုတ်……”နွယ်နီ၏တုံ့ပြန်သံအဆုံးကိုကျော်စိန်သည်ခင်အေးနှင့် အတူ လမ်းထိပ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်..။ မှောက်လျက် အိပ်နေလို့လဲ ခံစားချက် ဝေဒနာက မပျောက်..။ ပက်လက်လှန် အိပ်တော့လည်း ဝေဒနာကမထူခြား..။ နွယ်နီ စိတ်ညစ်မိသည်..။ တစ်ကိုယ်လုံး နေမထိ ထိုင်မသာဖြင့် စိတ်ထဲတွင် တစ်ခုခု လိုနေသလိုပင် ဖြစ်နေရသည်..။စိတ်ကူးတစ်ခုရ၍ နွယ်နီ လှဲနေရာမှ ထ၍ သူမ၏ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး ဒက်ဒီတို့ အိပ်ခန်းကို ဖွင့်၍ဝင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ဒက်ဒီ စားပွဲအံဆွဲများတွင် ဟိုရှာဒီရှာလုပ်ရင်းစီဒီခွေတစ်ချပ်ကိုဆွဲယူ၍စက်တွင်ထည့်ကာ ကြည့်လိုက်သည်..အခွေက အပြာကားဒီအခွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အရင်ကဒက်ဒီတို့အခန်း ရှင်းပေးရင်း တွေ့လို့ စမ်းကြည့်ပြီးပြီ..။ကောင်းလိုက်သည့် ဇာတ်ကား..ဇာတ်လမ်းလည်း ဆုံးရော နွယ်နီ စောက်ဖုတ်လေးလဲ ရွှဲနစ်လို့နေသည်.။ ပြီးတော့ ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာကလည်း မသက်သာသည့်အပြင် မီးလောင်ရာ လေပင့် ပိုလို့တောင်ဆိုးလာသည်..။နွယ်နီ အခွေကို သူ့ နေရာသူ ပြန်ထားရင်း စားပွဲပေါ်တွင်ဝီစကီပုလင်းရေသန့်ဗူးနှင့်ဖန်ခွက်တို့အဆင်သင့်တွေ့လိုက်သည်..။ မူးမူးနှင့်အိပ်ပျော်သွားရင်ကောင်းမည်ဟုတွေးမိကာဝီစကီနှစ်ပက်နီးနီးလောက်ထည့်၍ ရေနှင့် ရောပြီး သောက်ပစ်လိုက်သည်အရင်က တစ်ခါနှစ်ခါလောက်မြည်းစမ်းသောက်ကြည့်ဖူးသည်..။ ခုလောက်တော့ မများပေ…။နွယ်နီ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ အူရိုင်းလေး ဖြစ်၍ အရက်ရှိန် အတော်တက်လာသည်..။ သူမကိုယ်ပေါ်ရှိ အဝတ်အစား အားလုံးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမ၏ ဗလာကျင်းနေသောကိုယ်လုံးကိုမှန်ရှေ့တွင် လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို ကွ၍ ကားပြီး ငုံ့ကြည့်လိုက်မိသည်..။အို….သူမ စောက်ဖုတ်လေးမှအရည်လေးတွေ အောက်သို့အမျှင်လေးတွေတန်းကာတွဲလောင်းလေးထွက်ကျလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်သူမ ဆူဝေနေသော သွေးသားဆန္ဒကိုဘယ်လိုမှထိန်းမရတော့ပါ..။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကိုလက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဖိ၍ ဟလိုက်သည်..။
နီရဲနေသော စောက်ခေါင်းဝလေးတွင်မန်ကျည်းစေ့လောက်၇ှိသော စောက်စေ့ကလေးကထိုးထိုးထောင်ထောင်လေး ဖြစ်နေသည်ကိုမှန်ထဲတွင်အတိုင်းသား တွေ့မြင်လိုက်ရသည်..။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာစိတ်မှန်းဖြင့်လီးကိုမြင်ယောင်ကာစောက်ပတ်ဝလေးကိုလက်ချောင်းထိပ်လေးများဖြင့်လှည့်ပွတ်ပေးနေမိသည်..။အို….အရသာ….ရှိလှပေမယ့်…..အားမရချင်။ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ….။နွယ်နီမှန်ရှေ့မှလှည့်ထွက်ခဲ့ပြီးကုတင်စောင်းတွင်ထိုင်လိုက်သည်။ပြီးတော့ပက်လက်လှန်ချကာပေါင်ကား၍စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကိုပွတ်၍ကလိမိသည်နွယ်နီသည်နဂိုကထကြွနေသောရမ္မက်စိတ်ကို လက်ဖြင့် ဖြေဖျောက်ရင်း အပြာကားကို ကြည့်ခဲ့ပြီး အရက်ကိုပါ သောက်လိုက်မိလေတော့သူမ၏ရာဂစိတ်တွေက အဆမတန်ပင် ထကြွလာရုံမက အ၇ှက်တ၇ားပင် မရှိတော့သလောက်နီးနီးဖြစ်လို့နေပါပြီ..။ဟင်းဟင်း..အင့်….အင်း…….ပွတ်ရင်းစောက်စေ့ကလေးကိုထိမိတော့ကျင်ဆိမ့်တက်သွားသည်..။ဒီတော့စောက်စေ့ကိုဖိ၍ပွတ်သည်..။စောက်ခေါင်းထဲကိုတစုံတခု ထိုးထည့်ချင်သော စိတ်တွေကလည်း ပြင်းပြထက်သန်လို့လာရသည်..။မှိတ်ထားသော မျက်လုံးထဲတွင်တော့ သူမတွေ့ခဲ့သည့် လီးကြီးကို အာရုံ မပြတ်ပေ..။ အင်း..ဟင်း..ဟင်း…..ရှီး……အ….ကျွီ..အိပ်ခန်းတံခါး ပွင့်သွားသံ ကြားသဖြင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲကို လှမ်းဝင်လာသောကိုကျော်စိန်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ တစ်နေ့လုံး မငြိမ်းနိုင်တဲ့မီး အရက်ပါ ထပ်သောက်လာလိုက်တော့ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ရဲဝံ့၍ နေပါပြီ..။ အိပ်ခန်းထဲမှ ငြီးသံ သဲ့သဲ့ ကြားရ၍တံခါးကိုဟကြည့်လိုက်ရာနွယ်နီတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရတော့ကိုကျော်စိန်ချက်ချင်းပင်အခန်းထဲသို့လှစ်ခနဲဝင်လာခဲ့လိုက်တော့သည်..။ ဟင်……….ဦးလေး……နွယ်နီ မျက်လုံးလေးတွေ ဝိုင်းသွားရစဉ်ကိုကျော်စိန်က အခန်းထဲ အရောက် မတ်တတ်ရပ်၍ပုဆိုးကိုချွတ်ချပစ်လိုက်သည်..အိုကိုကျော်စိန်ရှေ့သို့လှမ်းလိုက်ရင်းသူ့အင်္ကျီကိုပါဆွဲချွတ်လိုက်သည်..။ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားပေပြီ..။နွယ်နီလူးလဲထလိုက်ပြီးသူမ၏ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကိုကုတင်စောင်းတွင်ဒူးထောက်၍ထိုင်လိုက်သည်..။ရှေ့သို့လှမ်းလာသောကိုကျော်စိန်သူမနှင့်လက်တစ်ကမ်းအကွာသို့ရောက်လာသည်နေ…နေအုံး…..ဦးလေး…..ကိုကျော်စိန်ရပ်လိုက်သည်..။နွယ်နီကအိပ်ယာပေါ်တွင်ပင်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကနောက်သို့ပြန်၍ ထောက်ကာ လီကို ကြည့်ရင်း စောက်ပတ်ထဲ လက်ခလယ် ထိုးထည့်ကာကလိသည်..။ နွယ်နီ၏ လက်ခလယ်က စောက်ပတ်ထဲသို့ ပို၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြင့်အသွင်းအထုတ်လုပ်လာသည်အင်း…ဟင်း…….အင့်….အင်း……အနီးကပ် တွေ့နေရသော ကိုကျော်စိန် မနေနိုင်တော့နွယ်နီလေး…..သမီး စောက်ပတ်လေးထဲ ဦးလေိးုလိုးထည့်လိုက်ရင်ဒီထက်ပိုကောင်းမှာ ..သမီးရဲ့.ထည့်….ထည့်လေ….လာ..လာနွယ်နီက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းဆွဲခေါ်သည်..။ ရှေ့သို့ တိုးကပ်လာပြီး ကိုကျော်စိန်က ကုတင်ပေါ်မှနွယ်နီကို ကုတင်စောင်းတွင် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲစေပြီး သူမ၏ ခြေနှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးတဖက်စီတွင်တင်ကာ လီးကို စိုရွှဲနေသော စောက်ပတ်အဝတွင် တေ့ကပ်လိုက်သည်..။ သွင်းသွင်းတော့လေဗြစ်….ဗြစ်ဖွတ်…အား……အီးအား…အမေ့….အီး….စိတ်မထိန်းနိုင်တော့သောကိုကျော်စိန်ကအဆုံးဝင်အောင်တစ်ချက်တည်းဆောင့်၍သွင်းချလိုက်သည်..။နွယ်နီတစ်ယောက်ကော့တက်သွားပြီးတစ်ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်နေရှာသည်..။ကိုကျော်စိန်ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်..။မဆန့်မပြဲဖြင့်စောက်ပတ်လေးအဝမှသွေးစီးကြောင်းလေးတွေ့လိုက်ရသည်လက်လှမ်း၍နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေပေးလိုက်သည်..။လုပ်…..လုပ်လေဦးလေးရ…..အ..အမလေး..လေးနွယ်နီလေး….အင်း..အင်း…..ကောင်းလားသွေးထွက်နေမှန်းသိ၍နာကျင်မှုသက်သာအောင်အဆောင့်ရပ်ပြီးနို့တွေကိုကလိပေးနေရာမှမေးလိုက်သည်.အင်း……ဟင်း…..လုပ်….လုပ်..နာနာလေး…ကောင်း…ကောင်းတယ်……..ဆောင့်ပေးပါ….အား…အင့်…..အမေ့…….တအားဆောင့်ပေးပါ…..အ…အား…..ဆောင့်စမ်းပါ…ဦးလေးရဲ့ ..ဘာလဲ..အားမရှိဘူးလား….ကျွတ်…ကျွတ်….အင့်..ဟင့်…….ကိုကျော်စိန် သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဖိညှစ်ဆွဲကိုင်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်လိုးပါတော့သည်..။ ဗြစ်……..ဘွတ်……ပလွတ်…….ဖွတ်…..ဗြစ်……အား…….အင်း……အင့်………အ..အမေ့အား.အိ…..အ….နွယ်နီခါးလေးကော့တက်ကာခေါင်လေးဘယ်ညာရမ်းခါရင်း တစ်ချီ ပြီးသွားသည်..။မပြီးသေးသော ကိုကျော်စိန်က အရှိန်ကို လျှော့၍ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပေးသည်..။ နွယ်နီအာသာပြေသေးပုံမရ..။ စောက်ပတ်ထဲမှတလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြင့်ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ပေးနေသလို..။တစ်ချက်ချင်းဆောင့်ပေးနေရာမှခဏအကြာနောက်တစ်ချီအတွက်အပြီးလိုးရန်အိုင်ထွန်းရွှဲနစ်နေပြီးချော်ချွတ်ချွတ် ဖြစ်နေသော အရည်များကို သုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုကျော်စိန် ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲထုတ်လိုက်သည်..။ အိုး….မထုတ်…..မထုတ်နဲ့လေလုပ်လုပ်လုပ်လေဦးလေးကလဲကျွတ်..ပြောလိုက်ရတာနော်…..ဟင့်ဟင့်…..လိုးပါ့မယ်..နွယ်နီရဲ့…တော်ကြာနွယ်နီလေးကသာ နာတယ် တော်ပြီ မပြောနဲ့…အံမာ….ဦးလေးကလား…နွယ်နီခံနိုင်အောင်ခံမယ်….စိန်လိုက်..လေ…ဦးလေးတစ်ညလုံးလိုးပေးမလား..ဦးလေး အားကုန်သာ လုပ်…ကွဲချင် ကွဲသွားပလေ့စေ…ဦးလေးဟာကြီးသာမထုတ်ပစ်နဲ့….နွယ်နီအောင့်ပြီးခံနိုင်အောင်ခံမယ်နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ပြုံးလိုက်ကြကာနွယ်နီက မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးကိုမှိတ်ချလိုက်ပါလေတော့သတည်း…. ပြီးပါပြီ။